သူရဦးရွှေမန်း “၉၆၉ အဖွဲ့အစည်းများဟာ စာတမ်းတွေကပ် ၊ပြီးတဲ့ အခါမှာ သွေးထိုး စကားတွေ ဆောင်ရွက်နေ ဒါကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများက ဆောင်ရွက်နေပြီ” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« နိုင်ငံတော် သမ္မတကို တာဝန်ခံတဲ့ ဗိုလ်မှူးဇော်ဌေးရဲ့ တာဝန်မဲ့ မမှန်မကန် လုပ်ကြံမှုက တိုင်းပြည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့ ကြီးမားသော ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်
ကျနော် က ကိုသိန်းစိန် ထက် ကိုရွှေမန်း ကို ပိုယုံသလို အရည်အချင်း ကိုလည်း ပိုလို့နှစ်သက်ပါတယ် »
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း အမေရိကန် နိုင်ငံရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် Woodrow Wilson Center တွင် တွေ့ဆုံစဉ်။ (ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၃) နားဆင်ရန် ဦးရော်နီငြိမ်း 14.06.2013အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ လွှတ်တော်ရေးရာ ဆိုင်ရာ စနစ်တွေကို လေ့လာသင်ယူပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဲ့ဒီ့စနစ်တွေကို အားဖြည့်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို သူတို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံရေး နဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၁၃ရက်နေ့ နေ့လည်က ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် Woodrow Wilson Center မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ National Democratic Institute NDI အပါအဝင် အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်း ငါးခုက ကမကထ ပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့တဲ့ “တာဝန်သိ၊ အရည်အချင်းရှိ အစိုးရအဖြစ် မြှင့်တင်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို အားဖြည့်ပေးရေး” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျင်းပတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းက အဲ့ဒီ့လို ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း အပြည့်အစုံကိုတော့ ဒီပွဲကို ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ ဦးရော်နီငြိမ်းက ဆက်ပြောပြပေးပါမယ်။အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ လွှတ်တော်ရေးရာ စနစ်တွေကို လေ့လာဖို့ အကောင်းဆုံး နေရာဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖြစ်တယ်လို့ သူယုံကြည်ကြောင်း လည်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းက ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ “တာဝန်သိ၊ အရည်အချင်းရှိ အစိုးရအဖြစ် မြှင့်တင်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအခြေခံအဆောက်အအုံများကို အားဖြည့်ပေးရေး” ဆိုတဲ့ ပွဲမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Tags: Amnesty International, Chuck Schumer, Ehud Olmert, Israel, United States, Washington DC, Woodrow Wilson, Woodrow Wilson International Center for Scholars
This entry was posted on June 14, 2013 at 4:03 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.